ဗီယက်နမ် ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ လက်တွေ့ကမ္ဘာထဲက Ferrari 250 Replica သစ်သားကား! – MyMedia Myanmar
ဗီယက်နမ် ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ လက်တွေ့ကမ္ဘာထဲက Ferrari 250 Replica သစ်သားကား!
တကယ့် လက်တွေ့ကားပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ ပုံစံတူ ကားအရုပ်လေးတွေကို သစ်သားတွေသုံးပြီး ထုဆစ်ပုံဖော် နေခဲ့ကြတာကို အတော် လေး မြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်လို့ သစ်သားကားလေးတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးနေကြပါပြီ။ အဆိုပါ လက်ရာမြောက်ဖန်တီးမှု ပေါင်းများစွာကို C8 Corvette လောက်ကနေ စလို့ BMW 328 Hommage တွေ အထိ မြင်ခဲ့ ရပြီးပါပြီ။ မကြာသေးမီကပဲ အခုလို သစ်သားနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ တကယ့် Masterpiece တွေကို Scissor Door တွေ နဲ့ ရောယှက်ပြီးထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်ပေးလာတာကိုပါ Lamborghini Sian Roadster Replica မှာပါ မြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ ဖန်တီးမှုကတော့ တတကယ့်ကိုအံ့မခန်း အထင် ကြီးစရာပဲလို့ ဆိုနိုင်ပြီး အတော်လေး ကောင်းမွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမိုးနဲ့ Windscreen တို့ကိုပါ လက်ရာ မြောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ကားကတော့ Ferrari 250 GTO Replica ပုံစံ တူကားဖြစ်ပြီး အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ရက်ပေါင်း ၇၀ လောက် အချိန်ယူလိုက် ရပါတယ်။ အခုလို ထူးထူးခြားခြားတီထွင်မှုက တကယ်ကို အကျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး ကားကို ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ တကယ်လက်တွေ့ မောင်းနှင်နိုင်သလို တကယ်လည်း အလုပ်ဖြစ်တဲ့ Lighting System ကို တောင်ထည့်သွင်းလိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။
အခုလို ကားလေးကို ဖန်တီးထားတဲ့ Video ကို တော့ YouTube က သစ်သားလက်ရာတွေ ပြသလေ့ရှိတဲ့ ဗီယက်နမ် က Truong Van Dao ဆီကနေမြင်တွေ့ခဲ့ ရတာပါ။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပိုပြီးတော့တောင် လက်ရာမြောက် ကောင်း မွန်လာတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကားတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ သလိုပဲ အခုသစ်သားလေးကိုလည်း အစောပိုင်းဖန်တီးမှုတွေနဲ့ သေသေချာချာ အစပြုခဲ့ပြီး သစ်သားတွေ မထည့်သွင်း ခင်မှာ ကိုယ်ထည်နဲ့ အောက်ခြေပိုတောင့်တင်းအောင် စတီး Frame ကိုတော့ အရင် ဆုံးတပ်ဆင် ထားပါသေးတယ်။ အခုလို ဖန်တီးမှုမှာဆိုရင်တော့ Suspension စနစ် ကောင်းကောင်းတစ်ခု ကိုပါ ထည့်သွင်း ထားနိုင်သလို စတီယာတိုင် နဲ့လည်း ကောင်းကောင်း ချိတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ကားကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတော့ လျှပ်စစ်မော်တာနဲ့ စတီယာတိုင် အထိန်းအချုပ်တို့ကနေ အခြေခံ တည်ဆောက်ထားပြီးတော့ သစ်သားလက်ရာတွေကို ကားရဲ့ပုံစံ တစ်ခုရအောင် အသေအချာထည့်သွင်း ဖန်တီးထားရတာ ဖြစ်ကာ ကားတစ်စီးရဲ့ ဒီဇိုင်းအတိုင်း တကယ့်ကို ချောမွေ့စွာ ဖန်တီး တည်ဆောက်ထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ ကိုယ်ထည်အချိုးအကွေ့ နေရာလေးတွေနဲ့ အမိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ ဆိုပြီး Sanding Discs တွေကိုလည်း သုံးထားပါသေးတယ်။ ကားတစ်စီး လုံးရဲ့ သာမန် ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပါ ရအောင်ပုံဖော် နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အသေးစိတ်နေရာလေး တွေဖြစ်တဲ့ Windscreen Wiper တွေ ၊ တံဆိပ်နေရာတွေနဲ့ Faux Grilles တို့ကိုပါ ပါအောင် ထပ်ထည့်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကားမှာအားကုန်သွားမှာ မပူရအောင်လို့ Gauges တွေလည်း ထပ်ထည့် ပေးထား ပြီး ကားကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် Lacquer (ယွန်းအလွှာ) ထပ်ပြီးအသုံးပြုပေးထားပါသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော သစ်သားလက်ရာ တစ်ခုရဖို့က သစ်ပင်ကို အဆင့် ဆင့် ဖြတ်တောက် ထုဆစ်ပုံဖော် ရတာကြောင့် အခုလိုလက်ရာ မျိုးရလာတာနဲ့တင် တကယ်ကို ချီးကျူးစရာ ကောင်းနေပါပြီ။ တကယ် တော့ အဆိုပါ ဗီယက်နမ် ပညာရှင်ရဲ့ လက်ရာမြောက် ဖန်တီးမှုတွေကြောင့် တကယ်ကို တန်ဖိုးထားသူတွေလည်း ရှိလာပြီး အဆိုပါ ကား လေးကို Mercedes Benz GLA အသစ် တစ်စီးနဲ့ လဲလှယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာကြောင့်လည်း ရက် ၇၀ လောက် အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ အကျိုးကတော့ အံ့မခန်းပဲလို့ ဆိုရတော့မှာပါ။
The post ဗီယက်နမ် ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ လက်တွေ့ကမ္ဘာထဲက Ferrari 250 Replica သစ်သားကား! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-23T14:31:00+06:30August 23rd, 2021|MYCARS MYANMAR|